Abwaan Hadraawi oo Xarun cusub kaga dhawaaqay Hargeysa | Somaliland.Org
Abwaan Hadraawi oo Xarun cusub kaga dhawaaqay Hargeysa
July 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) iyo aqoonyahanno kale ayaa ku dhawaaqay Xarun cusub oo lagu magacaabo Xarunta Badbaadada Bulshada, taas oo ka hawl-geli doonta guud ahaan dalka.
Xaruntan cusub oo lagaga dhawaaqay gebo-gebadii Bandhig-dhaqameedkii Maxamed Mooge ee lagu soo gebo-gebeeyay Magaalada Hargeysa habeen hore, ayaa inkasta oo aan Xaruntan mid la mid ahi hore dalka uga jirin, haddana waxay kaga duwan tahay Xarumaha kale in Abwaan Hadraawi uu Guddoomiye-xigeen ka yahay, halka uu guddoomiye ka yahay Wiil Dhalinyaro ahi.
Markii lagu dhawaaqayay Xaruntan ugu horrayn waxa halkaa ka kacay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), isla markaana wakiishay in uu Xaruntaa ku dhawaaqo Guddoommiyaha Xaruntan oo ah Wiil dhalinyaro ahi. “Markaanu isu nimi ee aqoonyahan, Abwaanno iyo Suxufiyiinba ka tashanay waxa aynu uga faa’iidaysan karno Bandhig-Dhaqameedk Maxamed Mooge, wuxuu Hadraawi soo jeediyay in lagu dhawaaqo Xarun lagu magacaabo Xarunta Badbaadada Bulshada oo Afka qalaad lagu yidhaahdo, Center for Social Safety. Waliba wuxuu igu yidhi, Adigu guddoomiye ka noqo, Aniguna aan guddoomiye-xigeen kuu noqdo.” Sidaa waxa yidhi Maxamed Ismaaciil Saalax (Rajab) oo ah Guddoomiyaha Xaruntan.
Mr. Rajab waxa uu ka jawaabay su’aal laga yaabo in dadka qaarkii isweydiin lahaayeen, taas oo nuxurkeedu yahay sababta Hadraawi Guddoomiye-xigeenka uga noqday, halka Wiil dhalinyaro ahi Xaruntan Guddoomiye uga noqday. “Hadraawi marka uu leeyahay guddoomiye-xigeen baan noqonayaa ee Adigu Guddoomiye ka noqo Xaruntan waxa ku jira saddex faa’iido, kuwaas oo ay ugu horrayso, in uu dhiirigeliyo guud ahaan dhalinyarada, midda kale, Hadraawi wuxuu leeyahay, Anigu waqtigaygii waan soo qaatay ee waa waqtigii Dhalinyarada ee idinku wax hoggaamiya. Arrinta saddexaad ayaa iyana ah, in uu Hadraawi Siyaasiyiinta xilka haysa iyo Xisbiyadaba uu leeyahay ka fura dhalinyarada Albaabada. Waxaan leeyahay, Xaruntani cid walba way u furan tahay oo waanu soo dhawaynaynaa.” Ayuu hadalkiisa ku soo gebo-gebeeyay Rajab.